12 ก.ย. 2561 - 15:22 น.
မုန်တိုင်းခိုဖို့ စောင့်နေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်သူတွေ
အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကို မကြာခင် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ့် မုန်တိုင်းဒဏ်ကနေ ဘေးလွတ်ရာ ပြောင်းရွှေ့နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေလည်း ပါပါတယ်။
အင်အားပြင်း ဟယ်ရီကိန်းမုန်တိုင်း ဖလိုရက်ခ် Hurricane Florence ဟာ တနာရီကို မိုင် ၁၄၀ လောက် ရွေ့လျားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ အမေရိကန်မိုးလေဝသက ခန့်မှန်းပါတယ်။
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှာရှိတဲ့ မြို့တော်တော်များများကို မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပြီး အပျက်အစီးတွေလည်း များနိုင်တဲ့အတွက် ကမ်းခြေမှာနေတဲ့လူတွေ အပါအဝင် ဒေသခံတွေအားလုံးကို ကြာသာပတေးနေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ဘေးလွှတ်ရာ ပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ အာဏာပိုင်က သတိပေးထားတယ်လို့ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်က ကရင်ဒုက္ခသည် စောကရယ်မူးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားက မြို့ဆယ်မြို့မှာ ကရင်၊ ချင်း၊ ရှမ်းလူမျိုးနဲ့ တခြားမြန်မာပြည်သားတွေ ၇ ထောင်လောက် နေထိုင်ကြတယ်လို့ ကရင်ဒုက္ခသည် အဖွဲ့အစည်းက ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ အစည်းအဝေးကိုတော့ အတိုင်ပင်ခံ ရုံးဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်တို့ တက်ရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် သိသင့်တဲ့သတင်းများ